Nay Lwan Naung၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Nay Lwan Naung
Maletaungoo,bagoMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ Nay Lwan Naung's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
Nay Lwan Naung သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Nay Lwan Naung၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
♣တောသူမလေး♣ leftacomment for Nay Lwan Naung"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း…"Feb 26လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for Nay Lwan Naung"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှ နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေ.....အမှတ်တရလက်ဆောင် ပို့ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ. ။အစစအဆင်ပြေပါစေ...."Jul 9, 2012Nay Lwan Naung ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Jul 8, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
11:07am အချိန်February 26, 2013, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
12:28am အချိန်February 26, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 7:42pm အချိန်July 9, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
တို့ကိုလည်းသွားရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 9:00am အချိန်July 9, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှ နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေ.....အမှတ်တရလက်ဆောင် ပို့ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ. ။အစစအဆင်ပြေပါစေ.... မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Top News · Everything Soe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookအတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ40 minutes agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'43 minutes ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on dimplemit's blog post 'အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ'"ကျေးဇူးပါ"2 hours agoဖိုးကံထူး posted photos 11 more…2 hours ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on မူကြိုဆရာ's blog post '“ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းသူနှင့်သာ ပေါင်းဖော်ပါ”'"သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ"2 hours agoaung aung soe commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး'"ဖတ်မှတ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။"3 hours agodimplemit posted blog postsအတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်3 hours agoaung aung soe commented on dimplemit's blog post 'ဒုက္ခများမြောင် လူတို့ဘောင်ဝယ်'"မိုးလင်းကမိုးချုပ် မျက်လုံးမှိတ် လိုက်တဲ့အချိန် အတွင်း အပူ…"3 hours agodimplemit leftacomment for ဖိုးသားကြီး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"3 hours agodimplemit leftacomment for ရှင်ဧသိကဓမ္မ (ကန့်ဘလူ)"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"3 hours agodimplemit leftacomment for ဇော်ဇော်ဦး"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"3 hours agodimplemit leftacomment for မြတ်ကိုကိုဟန်"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"3 hours ago More... RSS